रातारात फु'ट्यो ओली गुट !
रातारात फु’ट्यो ओली गुट !
काठमाडौं – नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन चितवनमा शुक्रबार हुँदैछ । नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको १० महाधिवेशनमा नेताहरुले आ—आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्षमा केपी ओली नै दोहोरिने संभावना छ । उपाध्यक्ष भिम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, उनी निर्वाचित हुने संभावना न्युन छ ।
किनेभने प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । पार्टी विभाजनको तहमा पुगेपछि भने आफूसँगै रहेका सहयात्रीलाई छोडेर एमालेतिरै फर्किएका थिए । त्यसो हुँदा उनीसँग हिजोको विद्रोही शक्ति त छैन नै ओली समुहको ठूलो भिडले पनि उनलाई साथ दिने अवस्था छैन ।
एमालेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा ओली समूह भित्रै विभाजन आएको छ । एक जना हुने बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा नेताहरु ईश्वर पोखरेल र पूर्वसभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले दाबी गरेका छन् ।
यसअघि उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुषालले पनि बरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबेदारी दिएका छन् । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका नेम्वाङ्ग र पोखरेलको उम्मेदवारीले ओली गुटमा फूट आएको देखिन्छ ।
ओली सरकारमा सबैभन्दा धेरै लाभ लिने पोखरेल पटक पटक मन्त्री बनेका थिए । उनी पनि ओलीबाट सबैभन्दा लाभ पाउने व्यक्ति मध्ये पर्छन् । ओली सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री हुँदै विनाविभागिय उपप्रधानमन्त्री पनि पोखरेल नै बनेका थिए ।
यति समुहलाई कौडीको भाउमा राजा विरेन्द्रको जग्गा भाडामा दिनेदेखि कोरोना कालमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा पोखरेल मुछिएका थिए ।त्यस्तै संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ्गले संविधान नै च्यातिने गरि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दापनि मुख खोलेका थिएनन् ।
उनको मौनतालाई कतिपयले ओलीको चाकडीको संज्ञा दिएका थिए । यसअघि एमालेको कुनै पनि कार्यकारी भूमिकामा नभएका नेम्वाङ्गले पोखरेलसहित घनश्याम भुषालसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त यसअघि बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्षहरु भिम रावल, अष्ट्रलक्ष्मी शाक्य लगायतले पनि बरिष्ठ उपाध्यक्षमै उम्मेदवारी दिए भने अझै रोचक प्रतिष्पर्धा हुने छ ।